iPhone 6S မှဘာတွေမျှော်လင့်ရမလဲ။ | Gadget သတင်း
Juan Colilla | | Apple, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
သည်အထိအများကြီးအကြွင်းအကျန် WWDC '15 ဘယ်မှာရှိ iOS9y Septiembre က de 2015 ဘယ်ဟာအရင်နှစ်တွေအပေါ်မှာအခြေခံပြီး Apple ကိုတင် iPhone 6S နှင့် 6S Plus သို့မဟုတ်သူတို့ခေါ်သောသမျှ။ သို့သော်၊ ကွန်ယက်တွင်ပျံ့နှံ့နေသည့်ကောလာဟလများစွာရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ (တကယ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောကောလာဟလများပြင်းထန်စွာမပေါ်ပေါက်ပါက) ပြောစရာများစွာရှိသေးသည်ဟုမထင်ပါ။
ဒီနေရာမှာငါခန့်မှန်းအပေါ်အခွင့်အလမ်းယူနိုင်ပါတယ်ထင်ပါတယ် ဘာပဲ ငါကအနာဂတ် iPhone ပါဝင်သည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် သို့မဟုတ်ငါကထည့်သွင်းရန်ချင်ပါတယ်။
လုပ်ကြရအောင် အပိုင်းအခြား, ငါတို့နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် ...
Apple သည် OLED ဖန်သားပြင်ကိုရွေးချယ်တော့မည်ဟုကောလဟာလသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။ ၎င်းတို့ကို iPhone 6S နှင့်အတူတကွတင်ဆက်ပါ။ တိုးတက်မှုမှန်သမျှကိုအမြဲကြိုဆိုပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအရောင်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောတောက်ပမှုကိုပေးဆပ်လိုပါကဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
နောက်လာမယ့် iPhone မှာ Apple Touch က Force Touch လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာကိုထည့်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ Apple သည်အပြောင်းအလဲများစွာရှိလိမ့်မည်ကိုသံသယရှိသည်။ ယခင် iPhone ကို အခြေခံ၍ အက်ပဲလ်သည်အိုင်ဖုန်းဒီဇိုင်းကို ၂ နှစ်ကြာအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားသည်။ iPhone2ကိုအလှဆုံးစမတ်ဖုန်းအဖြစ်လူအများနှစ်သက်သဘောကျသည့်အခါဤကိစ္စသည်လျော့နည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စျေးကွက်။ အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်သောအစိတ်အပိုင်းများ၏အရွယ်အစားလျှော့ချမှုကြောင့် Apple သည်အတွင်းပိုင်းအားဖြည့်မှုများထပ်မံထည့်သွင်းရန်အခွင့်အလမ်းယူပြီးကောင်းမကောင်းကိုကြော်ငြာနေဆဲအခြား bendgate မှမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကောလဟာလများထွက်ပေါ်နေသည်မှာ iPhone အသစ်သည်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးစလုံးပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းကဲ့သို့သောအခြားဆိပ်ကမ်းများတွင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းဖြစ်သည် ဂုဏ်အသရေ6Plus အား ၎င်းသည်ဥပမာအားဖြင့်အလင်းပိုမိုရိုက်ကူးခြင်းအတွက်အားသာချက်များကိုပေးသည်။ မှန်ဘီလူးတစ်ခုစီကိုကွဲပြားသောထိတွေ့မှုဖြင့်ရိုက်ကူးခြင်းအားဖြင့်လည်း HDR ဓါတ်ပုံများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ Optical zoom အကြောင်းပြောဆိုခြင်းပင်၊ အရည်အသွေးလျှော့ချရန်မလိုဘဲပုံရိပ်ကိုပိုမိုနီးကပ်စေပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်တူညီသော terminal အတွင်း၌ပိုမိုကြီးမားသောအထူနှင့်နေရာလိုအပ်သည်။ အလယ်တန်းအစ်ကို (4'7″) သည်အစ်ကိုဖြစ်သည့်6Plus ထံမှ OIS သို့မဟုတ် optical stabilization system ကိုအမွေဆက်ခံရန်မကောင်းပေ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးခုန်နှုန်းနှင့်ဗီဒီယိုများအားတုန်ခါမှုမရှိဘဲလျော်ကြေးပေးခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ကောလဟလများများပိုများလာသည်နှင့်အမျှ Apple A9 ကို 14-nanometer နည်းပညာအရ Samsung မှထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာလက်ရှိ 8-nanometer A20 ထက်သေးငယ်သည်။ Samsung မှ Samsung သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အကြောင်းအရင်းမှာအရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်နှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်နည်းပညာမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိခြင်းအပြင်၎င်းသည်ယခင်က A8 ၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလွှဲပြောင်းယူရန် TSMC ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုအကြီးအပြိုင်ဘက်။
ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရ iPad Air 8 ၏ A2X ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ iPad Ai2မှာ 2GB အထိ RAM တိုးလာတာကြောင့် iPhone အသစ်ဟာဒီတစ်ခုတည်းသောချစ်ပ်တစ်ခုတည်းနဲ့သုံးပြီးဒီပမာဏကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ LPDDR4 နည်းပညာအသစ် (iPad Air2တွင်23Gb LPDDR1 module များရှိကြောင်းသတိရပါ) ၎င်းသည်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ (ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Apple သည် iPhone2တွင် 6Gb မပါဝင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်)
အဘယ်ကြောင့် 2Gb ဆက်သွယ်၍ မရသေးပါသနည်း။ တကယ်လို့သင်ဟာ iOS အသုံးပြုသူဖြစ်တယ်ဆိုရင် iPhone 5S or6နဲ့အတူသင်ဟာ memory အများကြီးကုန်သွားရင် Safari ကတစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ခဲ့ရင် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုပြန်ဖွင့်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် app များ multitasking ၌ပင်ကောင်းမွန်ပြီး 1Gb နှင့်အတူစနစ်တစ်ခုတည်းသာအလုပ်လုပ်သည်။
အဘယ်ကြောင့် 2Gb သို့တိုးမြှင့်? iOS9မှာလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေပါ ၀ င်လာမှာဖြစ်ပြီးမှတ်ဥာဏ်သုံးစွဲမှုတိုးလာမှာပါ။ ဒါ့အပြင်ပြိုင်ဘက်ထုတ်လုပ်သူအားလုံးက 3Gb RAM ပတ်ပတ်လည်မှာရှိနေပြီး iPhone ကိုစာရွက်ပေါ်မှာအားနည်းနေတဲ့ဖုန်းလို့ထင်ရအောင်လုပ်နိုင်မှာပါ။ ဒီအမှုမဟုတ်ပါ။ သို့သော် RAM 4Gb သို့တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ယခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်သင့်သောယုတ္တိကျသည့်သဘာဝခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သံသယများလား။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော့်ကိုတွေ့တဲ့သူက 64-bits ပါ ၀ င်တဲ့ CPU ရဲ့ဗိသုကာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ အဲဒါကိုငါသံသယမဖြစ်ဘူး။ (အက်ပဲလ်ဟာဒီအပိုင်းကိုခဏပဲခုန်လိမ့်မယ်မထင်ဘူး၊ ယုတ္တိမတန်ဘူးလား၊ ပြissueနာက iPad Air3လိုမျိုး Core သုံးခုရှိမှာလား။ ဒါမှမဟုတ် Apple က Quad-Core သတ္တဝါတစ်ကောင်ကိုပြသမှာလား ဟုတ်ပါတယ်။ Apple က ၃ ခုကိုရွေးမှာဖြစ်ပြီး Dual-Core ကိုတောင်မှသိမ်းထားမှာပါ။
ကြိမ်နှုန်း? ချစ်ပ်အသစ်တစ်ခုသည် 2.0Ghz သို့တက်ရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးပိုမိုနီးကပ်စေရန်အတွက်သဘာဝအရာသည် (သူတို့သတ်မှတ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည့် S ဗားရှင်းဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဂရပ်ဖစ်အပိုင်း၌တည်၏ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone နှင့် iPads များအတွက် GPU များထောက်ပံ့ပေးသော Imagination ကုမ္ပဏီမှ PowerVR GX6650 သို့မဟုတ် PowerVR 7XT နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံသည်နှင့်၎င်းသည် (iPhone အားလုံးကဲ့သို့) စျေးကြီးရမည့်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ 7XT GPUs အသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တောင်းခံလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် GX6650 သည်အလွန်ကောင်းသည်။6မှာ VR GX6 ရှိပြီး 6450S the GX5 ... ) ဒါပေမယ့်လူအများယုံကြည်ကိုးစားပြီး (ငါတောင်မှ) ပြင်ဆင်ထားဖို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မျိုးဆက်သစ်ခုန်နိုင်မှုအတွက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိုဘိုင်းဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းသည်ကောင်းမွန်လာပြီးအမြတ်အစွန်းများများရရှိလာသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
ဒီ iPhone အသစ်ကငါတို့အားလုံးကိုဘာအံ့သြစရာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်လဲ။ ကြည့်ကျတာပေါ့:
နီလာကျောက်ကပ်မျက်နှာပြင် - GT Advanced သည် Apple ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လှုပ်ခတ်နေသောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ယနေ့ iPhone6or6Plus ပိုင်ရှင်များသည်ဤတန်ဖိုးရှိသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောဖန်သားမှခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်မျက်နှာပြင်များမနှစ်သက်ကြပါ။ ဗားရှင်း (Gorilla Glass ဖြစ်ဟုဆိုသည်) ။
စတီရီယိုအသံ မင်းရဲ့ iPhone ထိပ်ကိုကြည့်ရင်တောင် Apple ကဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကအရွယ်အစားကိုလျှော့ချမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Speaker ကိုအထက်မှာတင်ပြီးစတီရီယိုအသံနဲ့တပ်ဆင်ထားတာမျိုးပေါ့။ ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင်၎င်းသည်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ခုထက်ပိုသောကျေနပ်မှုရရှိစေမည့် Apple ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ရေစိုခံ: ဘယ်သူက iPhone ကိုရေစိုခံချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါက၎င်းကို ၂ မီတာအထိမြင့်မားအောင်ပြုလုပ်ရန်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ Apple က Lunatik (သို့) LifeProof ကဲ့သို့သောအခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှထိုပစ္စည်းကိုစွန့်ခွာလိုသော်လည်း၊ ၎င်းသည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ရေတစ်ခွက်ကိုမိုးရေထဲထည့်လိုက်တယ်။
အက်ပဲလ်ဟာအိုင်ဖုန်း6နဲ့အတူအတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေထဲကိုရေမ ၀ င်အောင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရာဘာတွေနဲ့ခလုတ်တွေကိုဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအားစိုက်ရ ဦး မယ်။ Gore-Tex LifeProof သည်စပီကာများနှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းများကိုလေကြောင်းဖြင့်စီးဆင်းစေသော်လည်းရေသို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အလင်းရောင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အခြားဆိပ်ကမ်းများ၏အတွင်းပိုင်းကို Galaxy S5 သို့မဟုတ် Xperia Z ၏ tabs များမလိုအပ်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ဤဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုကဲ့သို့ဖြေရှင်းချက်တွင်ကန့်သတ်ချက်များရှိသောကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်ဆားငန်ရေတွင်၎င်းသည်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့်ဖုန်းများမှာရေမြုပ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းအပိုင်းကိုဆားငန်ရေနှင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သောအဖုံးများသို့ငါထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
[poll id = » 10 poll]
အကြောင်းအရာ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့် iPhone အသစ်တွင်သင်မြင်လိုသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များချန်လှပ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » Apple » iPhone 6S မှဘာတွေမျှော်လင့်ရမလဲ။
သင်တင်ပြခဲ့သောဆောင်းပါးသည်ကောင်းမွန်ပြီးစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်၊ iPhone6ကိုကြည့်ပြီးသောအခါ၊ iphone 6s မှာ 2gb ram, OIS နှင့်အရာအားလုံးသုံးခုအထက်မှာပြောထားသကဲ့သို့ရှိသည်။
64Gb memory သည် access memory ဖြစ်ပြီး 128 နှင့် 256 ဗားရှင်းများကိုထည့်သည်
- သူတို့သည်5နှင့် 5s များကဲ့သို့ချန်ထားရန်အတွက်အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းကိုခြယ်သထားသည်။ အင်တင်နာတွေအတွက်ဒီဒဏ်ချက်တွေကတကယ့်ကိုဆိုးဝါးလှပါတယ်။
သန့်ရှင်းသောဘုရား 256 gbs !!!!!! ချစ်သူ
သူတို့ chicha haha ​​အားလုံးကိုထုတ်ပြီးနောက်ဆုံး iPhone ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်သည် screen ပေါ်တွင် hologram projector ကိုလွဲချော်သွားသည်။
အများဆုံးမှာအနည်းဆုံး memory က 32 ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့က Apple ကိုပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် 16 ပြီးတော့ 64 နဲ့ 128 ကို XNUMX ပြီးတော့ထားခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်။
- အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး၊ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးနှင့်ဖြစ်နိုင်လျှင် optical zoom
- အကောင်းဆုံးပရိုဆက်ဆာ၊ ယုတ္တိရှိသည့်အရာ။
- ပိုကောင်းသောမျက်နှာပြင် (ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်) OLED ကိုကြိုဆိုပါကလူမည်းများပါ ၀ င်သည်
ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းပြောခြင်း ios9ငါသူတို့နောက်ထပ် botch တစ်ခုမလုပ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါကအားလုံးရဲ့အကောင်းဆုံး IOS ပဲ
သင်တီထွင်မှုများနှင့်အိပ်မက်များပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ သငျသညျ 6s ယူဆောင်လာလိမ့်မည်ကိုသိလိုပါသလား? iphone5နှင့် 5s စတင်ခြင်းကိုသွားပါ။ ဒီအချိန်မှာအိုင်ဖုန်းရဲ့ဘဝမှာပိုများလာမယ်ဆိုတာကိုယုံဖို့ခက်တယ်
ကောင်းပြီ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Apple ဟာ ahahahaha ကိုကော်ပီကူးမထားဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါ
တရုတ်သတိပေးချက် LED တစ်ခုကုန်ကျတဲ့ LED လား။
WWDC '09 ?? WTF? ဒါ WWDC '15 ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လော ?? ဟားဟား။ စာမူများကိုထုတ်ဝေခြင်းမပြုမီပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။ 🙂
ကောင်းပြီမြင်ဖူးငါ9ငါ့ ဦး ခေါင်း၌ရှိပြီးသား, တညျ့, အစီရင်ခံမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်!